🥇 ▷ LG Ka Shaqeynta G Pad 5 Kiniiniyada, oo wata Naqshad Cusub, 2016 CPU ✅
LG Ka Shaqeynta G Pad 5 Kiniiniyada, oo wata Naqshad Cusub, 2016 CPU
Goorma ayey ahayd markii ugu dambeysay ee aad maqashid LG oo bilaabayya kiniin? Waxay ahayd daqiiqad kulul, waan qirayaa, laakiin waxay ku noqdeen naqshad cusub iyo CPU duug ah oo qurux badan, oo loo diyaariyey aalad loo yaqaan LG G Pad 5. Soo saareyaasha XDA waxay ogaadeen in shirkaddu ku shaqeyneyso kiniin cusub anagana hoos ayaan faahfaahin ku heynaa.
LG G Pad 5 waa magaca la yaqaan ee ilaa iyo hadda waxaan ognahay inuu ku shaqeynayo processor-ka Qualcomm Snapdragon 821, oo ay la socdaan 4 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keydin ah. Waxaan u maleynayaa inay wax ka sii dari karaan waaxda ‘CPU’, maadaama ay wali tahay jawi macquul ah oo macquul ah. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday LG G6, OnePlus 3T iyo Google Pixel ee ugu horreeyay. Way fiicnaan kartaa in lala tartamo Samsung Galaxy Tab S5e iyo Snapdragon 670.
Qalabka wuxuu ku shaqeynayaa Android 9.0 Pie, oo leh caadada LG UI ee dusha sare waxaana la filayaa inuu ugu horeeyo shaashadda 10.1 inch 16:10, kaas oo bixiya xalka 1920 x 1200 pixel pixel. Bezels sidoo kale way ka khafiifsan yihiin silsiladaha hore ee LG waxaanan sidoo kale fileynaa iskaanka sawirka faraha, 4G LTE taageero iyo hal kamarad hore. Wararka xanta ah waxay ka hadlayaan kulankooda ugu horeeya ee Oktoobar ama Nofembar mana cada ilaa iyo hadda sida loo qiimeeyo aaladda.
Waxay u egtahay tanaasul udhaxeysa mid dhexe iyo mid dhexe. Waxay sidoo kale u muuqataa inay u tartamayso iPad-ka dhowaan la sii daayay 10.2, laakiin midkaas ayaa leh faa iidada ugu fiican ee loogu ciyaaro qaab wanaagsan.